हातको छाला नराम्रो भएर देखाउन लाज मान्नुहुन्छ ? उसोभए अपनाउनुहोस् यो घरेलु उपाय – Sanjal Nepal
Homeस्वास्थ्य /जिबनशैलीहातको छाला नराम्रो भएर देखाउन लाज मान्नुहुन्छ ? उसोभए अपनाउनुहोस् यो घरेलु उपाय
November 23, 2020 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 8679
काठमाडौँ । मानिसहरु सुन्दर , आर्कषक र चम्किलो छाला बनाउनको लागि धेरै महङ्गा छालालाई सेतो बनाउने क्रिमको प्रयोग गर्ने गर्दछन् । तर यस्ता क्रिमको प्रयोगले हाम्रो छालालाई हानी गर्दछ ।
आज हामी तपाइँलाई छालाको समस्याबाट छुट्कारा पाउने घरेलु उपायको बारेमा जानकारी दिन्छौं । किराना पसलमा पाईने ३ प्रकारको सामाग्रीको प्रयोग गरी मास्कलाई बनाउन सक्नुहुन्छ । यस माक्सको प्रयोग तपाइँले हातखुट्टाको छालाको समस्याको लागि गर्न सक्नुहुन्छ ।
यसको प्रयोग तपाइँले निम्नानुसार गर्न सक्नुहुन्छ :
१. १ चम्चा मह
२. १ चम्चा दहि
३. १ चम्चा कागतीको जुस
माथिका सबै सामाग्रीहरुलाई राम्ररी मिसाउनुहोस् । त्यसपछि यस मास्कलाई समस्या भएको छालामा लगाउनुहोस् । यसलाई १५ मिनेटसम्म त्यसै छोड्नुहोस् । र सुकिसकेपछि यसलाई र्खुकाउनुहोस् । यसलाई खुर्काउँदा छाला हल्का रातो देखिने हुँदा तपाइँले यसको प्रयोग राति सुत्नुभन्दा अगाडि गर्नु राम्रो हुन्छ । र यस मास्कको प्रयोग हप्तामा २ पटक भन्दा बढि नगर्नुहोस् ।
November 21, 2020 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 11237
November 25, 2020 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 10994
कागती पानी धेरै नपिउनुहोस्, तपाईंलाई पुर्याउँछ यस्तो हानी जानिराखौ !
February 14, 2021 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 12630
तपाईले आजसम्म कागतीको फाइदा बारे मात्र सुन्नुभएको छ हाेला सायद । कागती वजन (ताैल) कम गर्न मात्र नभएर छालाको हेरचाहको लागि पनि काम आउँछ । तर आज हामी यसको बढी प्रयोगले कस्तो हा नी पुग्छ
LEX 18 agenda conversation: Job club (445185)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (418748)
Hello world! (346058)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (318850)